iyo apple iphone 12 ndeyekupedzisira zviri pamutemo. tinogamuchirwa ku5g
Kuru Nhau & Ongororo Iyo Apple iPhone 12 ndeyekupedzisira zviri pamutemo. Kugamuchirwa ku5G
Iyo Apple iPhone 12 ndeyekupedzisira zviri pamutemo. Kugamuchirwa ku5G
Chiitiko chakamiswa che iPhone chakazopedzisira chaicho uye nhevedzano nyowani yePhones yakafumurwa. Gore rino, tinowana huwandu hwakazara hwemhando ina dze iPhone 12 - wow! Uye ese iwo akagadzirira iyo 5G nguva.
Apple achangobva kuzivisa iyo iPhone 12 mini , iPhone 12 , iPhone 12 Pro uye Pro Max
Iyo iPhone 12 inotanga pamadhora 829 ($ 799 neVerizon uye AT&T). Iyo yakamisikidzwa kuve inonyanya kufarirwa sarudzo
iPhone 12 pre-maodha anotanga: Gumiguru 16
iPhone 12 kuburitswa: Mbudzi 23rd
iPhone 12 vs iPhone 11: chii chitsva?
iPhone 12 ine OLED skrini, panzvimbo yeLCD
iPhone 12 ine imwecheteyo A14 processor inowanikwa mu iPhone 12 Pro
iPhone 12 muviri une mativi akatsetseka - achiyeuchidza iyo nyowani iPad Mhepo, iPad Pro
iPhone 12 ine yakakwidziridzwa zvishoma kamera - yakafara kuzarura, yakavandudzwa software kugadzirisa
iPhone 12 ine fungidziro yeMagSafe yekubatanidza. Foni inoenderana nemagineti charger nezvimwe zvinhu
iPhone 12 ine itsva yeCeramic Shield girazi, inonzi inogara yakasimba kupfuura nakare kose
Hapana charger, hapana maearphones mubhokisi
Yakazara iPhone 12 vs iPhone 11 kuenzanisa
Iyo itsva 'mainstream' iPhone
Gore rakapera, Apple yakaisa iyo iPhone 11 se 'iyo iPhone yekutenga'. Yakatanga pamadhora mazana manomwe, zvakadaro yaive nevemukati mayo uye imwecheteyo kamera kamera seyevamhando dzePro. Ehe, mamwe makona akachekwa - hapana AMOLED, hapana telephoto kamera, uye hapana mafuremu esimbi. Asi, pakupedzisira, vashandisi vakavhota nezvikwama zvavo uye zvakazoitika kuti iPhone 11 yaizivikanwa zvakanyanya.
Zvino, iyo iPhone 12 inounza toni yekukwiridzira kune inodikanwa modhi ichizadza mamwe emakomba ataurwa pamusoro.
Dhizaini 12 dhizaini uye kuratidza
Iyo iPhone 12 dhizaini isanganiswa yezvazvino uye zvekare. Tarisa pazviri kubva kumberi uye yakafanana neakanaka ol 'iPhone XS uye zvese zvirevo zvakazouya mushure mazvo. Ngora zvishoma uye iwe uchaona akanaka mativi mativi ayo anokuyeuchidza nezve echinyakare kutaridzika kweiyo iPhone 5.
Iyo iPhone 12 & apos; s muviri ndeyealuminium, senguva dzose, uye ine slab yegirazi kumashure kubvumidza iyo isina waya kuchaja. Girazi iri, zvakare, rinopenya sezvo kupera kwematte kwakachengeterwa iyo Pro mutsetse.
Ichokwadi kune midzi yayo, iyo iPhone 12 inouya mu5 mavara akasiyana - kubva pane nhema nhema, kune yakajeka mutsvuku, nyoro chena, uye nyowani girini nebhuruu.
Iko kumashure ndicho chako chaicho chakajairika dhiri, kunyangwe pasi kune iyo mbiri kamera module. Kwete telephoto lens pane 'iPhone yevanhu vazhinji' - iwe unenge uchiri kuda iyo iPhone Pro kuti utore katatu kamera.
Seyese, iyo iPhone 12 yakatetepa, yakareruka, uye diki zvishoma pane iyo iPhone 11.
Iyo skrini iri zvakare kuvandudzwa pamusoro peiyo iPhone 11 modhi. Kwete, kwete, ini handisi kutaura nezve 120 Hz pano. Nehurombo, chimiro ichocho hachina kuzviita kune iyo iPhone 12. Asi, kana zvirinani, iyo pani yekuratidzira iri OLED izvozvi. Vakadzika vatema, ane hupenyu makara, akachena-anotaridza mifananidzo, uye matete bezels. Iyo ine imwecheteyo Super Retina XDR yekumaka sePro mutsara wePhones, inotsigira HDR10, Dolby Vision, uye HLG.
Iyo iPhone 12 ine 6.1-inch skrini ine 1170 x 2532 resolution yepikisheni (chiyero cheiyo 19.5: 9). Iyo pixel-per-inch density ye457, yakapinza zvakanyanya kupfuura iyo 324 PPI - nhamba yemashiripiti iyo Apple yakamanikidza kunamatira munzira yese kusvika ku iPhone 11.
iPhone 12 Ceramic Shield girazi
Iyo iPhone 12 ikozvino yakavakwa neiyo itsva Ceramic Shield girazi. Iyo & apos; s yakagadzirwa mukubatana naCorning, asi Apple inosimbirira pakusashandisa iyo Gorilla Girazi yekumaka maPhones ayo, saka hatigone & apos; tinoziva kuti iri padyo sei neGorilla Glass Victus inodzivirira iyo Note 20 Ultra.
Chero zvazvingaitika, iyo Ceramic Shield inonzwika zvakanaka papepa - nanoceramic makristasi akaiswa mukati mepaneru, ichiita iyo ... isa chitaurwa mune ndapota! 'Toughest smartphone girazi'. Iwe unozviziva, pachave nekuwanda kwekudonha bvunzo kana izvi zvatanga kubuda.
MagSafe yadzoka! Zvakanaka, kwete paMacBooks, zvinosuruvarisa, asi zvirinani zvinoita kunge zvinotonhorera paPhones, futi. Mutsara wemagineti unozoita kuti zvive zvakanyanya, zvive nyore kwauri kuti uenzanise yako iPhone 12 pane isina waya charger. Apple yatounza mashoma anotonhorera MagSafe accessories zvekuchaja, pamwe nezviitiko. Iyo nyowani yeganda sleeve kesi ine MagSafe ikozvino ine diki diki hwindo rekuzivisa. Iyo iPhone icha 'ziva' kana i & apos; iri mune ruoko uye vhenekesa yakakosha diki interface yeiyo hwindo.
Iyo iPhone 12 haina kuuya nekatatu kamera, asi zvakadaro yakawana diki diki mune kamera specs. Nekudaro, isu tine 12 MP main wide-angle kamera uye 12 MP ultra-wide-angle lens. Asi iyo lens aperture yakakura zvakanyanya - F1.6 (zvichienzaniswa neF1.8 pane iyo iPhone 11). Izvi zvinoreva kuti sensor inowana mwenje wakawanda muchikamu chimwe chete chenguva, zvichiita kuti zvive nyore kuwana tsoka dzakagadzikana uye nekuvandudza mhedzisiro-shoma.
Pamusoro pezvo, kuvhurika kwakapamhama kunogadzira kudzika kwakadzika kwemunda, zvichireva kuti iwe unowana kusarudzika kwepashure kumashure zviri nyore.
Apple yakagadzirisazve iyo Yakadzika Fusion post-kugadziriswa kwemhedzisiro, Night Mode yakabatwa kumusoro, uye Smart HDR yakagadziridzwa kuita Smart HDR 3. Iyo yekupedzisira ikozvino zvine hungwaru inoziva zviitiko uye ichavandudza zvikamu zvega zvemufananidzo zvichibva nezvazviri & apos; anoona 'ipapo. Kufanana nekusimudzira ruzivo mumatombo uye zvipfeko, uku uchichengeta HDR auras iri pakatenderedza mativi.
Night Mode ikozvino inoshanda neyese iPhone 12 kamera - iyo huru shooter, iyo Ultra-yakafara kamera, uye kunyange iyo selfie kamera.
Ko zvakadii neselfie kamera? Zvakanaka, ndeye 12 MP shooter zvakare uye, kune zvese zvinangwa uye zvinoratidzika, zvinoita sekunge ichave yakafanana iyo yatinayo pane iyo iPhone 11. Zvinoreva - zvakanaka kwazvo.
iPhone 12 kamera sampuli
iPhone 12 processor uye ndangariro
Iyo iPhone 12 akateedzana - ese ari mana - anofambiswa neApple A14 chip iyo yakataurwa kumusoro panguva yekuzivisa kweMhepo yePadad. Iyo itsva Apple silicon, yakavakirwa pane 5 nm processor. Izvi zvinoreva simba rinobereka, pasingadiwi simba. Iwo maApple machipsi agara aine simba chaizvo uye tinotarisira kuti iyo iPhone 12 haizonyadzise.
Ipapo, isu tine matura ekuchengetedza. Iyo iPhone 12 inotanga ne 64 GB yekuchengetera, iyo ichiri yakanaka zvakakwana kune vasina-kurema vashandisi. Kana iwe uri mumwe wevanhu vanopedza hupenyu hwavo parunhare, unogona kuwana ne 64 GB, asi iwe uchafanirwa kuita yekuchenesa imba nguva nenguva.
Iyo inotevera tier ndeye 128 GB, ipapo inokwenenzvera kunze pa256 GB.
iPhone 12 tsananguro:
Ratidza: OLED, 6.1 ', 1170 x 2532 pixels
Processor: Apple A14, hexa-core, 5 nm (30% yakawanda simba rinoshanda)
Makamera: 12 MP main, 12 MP Ultra-wide; 12 MP kumberi kamera
Sarudzo dzekuchengetedza: 64 GB; 128 GB; 256 GB
Yep, iyo iPhone 12 yakagadzirira nguva ye5G. Iine rutsigiro rwemhando dzakasiyana dze5G mabhendi, iyo inobvumidza inosvika kusvika ku3.5 Gbps kurodha kumhanya. MuUS, iyo iPhone 12 inotsigira ese ari maviri mmWave (inosvika ku4 Gbps pasi, 200 Mbps kumusoro kumhanya) uye sub-6 GHz network, zvichireva kuti iwe uchavharwa zvisinei kuti ndeupi mushandisi waunofarira. Uye Zvakanaka ... kana vaine 5G kufukidza munharaunda yako, ndiko kuti. Uye hongu, iyo iPhone inozozvichinjira pasi kune 4G yekubatanidza chero iwe pausingade & apos; t inoda 5G kuchengetedza iyo yakakosha bhatiri mutero.
iPhone 12 kuburitsa zuva uye mutengo
Iyo iPhone 12 iri mune yekutanga wave yePhones nyowani ichazoburitswa. Iwe uchave unokwanisa kufanofanogadzira-o muna Gumiguru 16, uye kutumira kuchatanga vhiki mushure me - muna Gumiguru 23.
Mutengo wekutanga weiyo iPhone 12 i $ 799 yeiyo 64 GB modhi. Asi pane kubata! Uyu mutengo unongowanikwa chete kana iwe ukaimisikidza neAT & T kana Verizon pakutenga. Kana iwe ukatenga zvisina kuvhurwa, mutengo unokwira ne $ 30. Saka ... $ 829 kutanga mutengo weiyo iPhone 12.
Apple inovhura zviri pamutemo iPhone 12 Pro uye Pro Max
Apple & apos; s iPhone 12 mini inouya nemutengo mudiki, 5G, uye zuva rekuburitsa rakanonoka
iPhone 12 akateedzana hupenyu hwebhatiri hwakaziviswa: Heino & maapuro kuti vanoenzanisa sei neese maPhones apfuura
Iyo iPhone 12 uye 12 mini mutengo uye preorder madhiri paT-Mobile, Verizon, AT & T kana kukiyiwa
Iyo inoshamisa isingadhuri HomePod mini ndeyepamutemo ine makumi mashanu maficha maficha
giraxy s6 maringe s6 inoshanda
dhizaini yakanaka pane iphone 11
Sezvo 2018 inoguma, Microsoft, kwete Apple, ndiyo inonyanya kukosha kambani yeruzhinji pasi rose
Chizvarwa chechitanhatu Apple iPod nano haisisiri kutsigirwa naApple
Don & apos; dongedza iyo Galaxy S7 kumucheto: teardown chirongwa chinoratidza nei icho & apos; zvakaoma kwazvo kugadzirisa
Waiziva here - kubvisa yako foni bhatiri & apos; s bhatiri ndiyo chete nzira yechokwadi yekuzvidzivirira kuti isateedzwe
Izvo zvakanaka nezvakaipa zveRima Mode: Pano & apos; s nguva yekuishandisa uye nei
Samsung Galaxy S7 kumucheto kunogona kuita kunge kunorarama kwemaawa gumi nematanhatu pasi pemvura
128 vs 512GB: ndeipi Galaxy Note 20 Ultra yekuchengetedza sarudzo yaunofanira kuwana?
Kuvharwa kweneti AT & T 3G: Ko foni yako ichiri kushanda here kana iwe unoda imwe nyowani
T-Mobile vatengi vanoshandisa yakanyanya data, AT&T inouya yekupedzisira